Tokony hanitsy ny hadisoany ve ireo bilaogera? | Martech Zone
Tokony hanitsy ny hadisoany ve ireo bilaogera?
Asabotsy Jolay 19, 2008 Zoma, Jona 19, 2015 Douglas Karr
Misy fifanakalozan-kevitra tsara momba Cranky Geeks nivadika ho TWIT tamin'ity herinandro ity izay akaiky sy malalako amin'ny fanajana ireo mpanao gazety. Ireo bilaogera dia tsy mpanao gazety amin'ny hevitry ny teny nentim-paharazana fa isika dia mpanao gazety rehefa jerena amin'ny fomba fijerin'ny mpanjifa.
Zava-dehibe ny fanitsiana ary tokony hokarakaraina, saingy miankina amin'ny lesoka natao.
Ireo lahatsoratra taloha dia mbola 'velona' amin'ny valin'ny motera fikarohana ary misy ny fanehoan-kevitra mifandraika (matetika) amin'ny vaovao noresahina. Mihevitra i Dvorak fa adala ny miverina manao fanovana amin'ireo lahatsoratra taloha… mino izy fa raraka ny ronono ary satria tsy misy mamaky azy io matetika dia vita ary vita ary tokony handroso ny mpampiasa. Niresaka i Leo fa noterena hanitsy ny lahatsoratra izy, indrindra raha misy fanehoan-kevitra miseho diso tafahoatra amin'ilay fanovana taorian'ny nanaovana azy. Miombon-kevitra amin'i Leo aho!
Attribution - raha malahelo aho amin'ny famoahana sary, quote, lahatsoratra sns dia hanao fanovana ilaina avy hatrany aho na inona na inona ny taonan'ny lahatsoratra. Zava-dehibe (raha tsy mahasarika araka ny lalàna) ny manome antoka fa manome ny trosa tokony hisy izahay.
Hadisoana nasongadin'ny fanehoan-kevitra - rehefa mahita lesoka ao amin'ilay lahatsoratra ny mpamaky ny bilaogiko, dia matetika no ahitsiko ny lesoka ary hamaly amin'ny alàlan'ny fanehoan-kevitra fa efa nohamarinina sy ny fankasitrahako ny vaovao nomen'izy ireo. Manome firaketana an-tsoratra ny fanovana izany ary koa mampiseho ireo mpamaky fa tsy olombelona ihany aho, fa miahiahy momba ny maha marina ny fampahalalana azoko.
Fahadisoana hitako - Hampiasa ny tag fitokonana amin'ny HTML aho hanondroana ny lesoka sy ny fanitsiana. Tsotra ny fampiasana ny tag ny fitokonana.
Ny teny hitokona
Averina indray, tsy jerena ny taonan'ny lahatsoratra. Tiako ho marina ny lahatsoratro, ary tiako ho hitan'ny mpamaky rehefa nanao hadisoana aho ary nanitsy azy. Miorina amin'ny fahatokisana izany - ary ny fanekena ny hadisoanao dia misy lanjany.
Fitsipi-pitenenana sy tsipelina - Rehefa tena hitako fa nanao hadisoana amin'ny fitsipi-pitenenana aho (mazàna olon-kafa tsy maintsy milaza amiko) dia hanao ny fanitsiana aho ary tsy hanambara izany. Satria tsy manova ny maha-marina ny lahatsoratra am-bilaogy izany, tsy tsapako fa mila manambara ny maha-mahatsiravina ahy amin'ny fitsipi-pitenenana sy ny tsipelina aho. Inona moa fa ny mpamaky ahy mahazatra efa mahatsapa an'io!
Amboariko ny lesoka rehetra hitako na nasehon'ny mpamaky ahy. Tokony ianao koa! Tsy toy ny mpanao gazety an-tsoratra, manana fahaiza-manao mandroso amin'ny fanovana an-tserasera izay tsy mitaky izahay 'hamoaka indray' lahatsoratra.
Tsy mino mihitsy aho fa ilaina ny manosika naoty ao amin'ny lahatsoratra bilaogy manaraka izay mamaritra ny fanovana amin'ny lahatsoratra teo aloha (toy ny John markoff naroso tamin'ny seho Cranky Geeks!), ny firesaka bilaogy dia fomba fifampiresahana sy fifampiresahana fotsiny. Hanaiky ny lesoka ny mpamaky… raha tsy hoe tsy namboarina daholo.
Momba ny fahamendrehana sy ny fahefana ary ny fahamendrehana no anaovako fahazarana manitsy ny hadisoan'ny bilaogiko. Tsy manan-kery ny bilaogy iray raha tsy mino ny mpamaky ny vaovao misy sy manondro izany. Mino aho fa raha tsy jerenao ny fanitsiana ny lesoka nataonao dia hilamina ny fahatokisanao azy - toy ny isan'ny mpamaky anananao sy ny isan'ny tranonkala miresaka anao.
Tags: paikady fitorahana bilaogyeBookpaikadin'ny ebookpejy fanatsarana pejyvahaolana momba ny pejypejy fitarihana fitarihanamultidomain
Fanesorana amin'ny lisitra mainty an'i Comcast
Mitatitra ny halatra atiny amin'ny Adsense ho fanitsakitsahana ny DMCA
19 Jul 2008 amin'ny 11:23 PM
Miaraka aminao aho manitsy ny lesoko. Tsy zakako ny mandao azy ireo aorian'ny fahitako azy ireo!
19 Jul 2008 amin'ny 11:32 PM
Manaiky aho fa ny lesoka dia tokony ahitsy ASAP… izany ve satria ny mpampianatra teny anglisy ahy tany amin'ny lisea dia nampiditra izany tao an-tsaintsika? Eny, fa noho izy mety ihany koa, imho.
Nahaliana ahy ny lahatsoratry ny bilaoginao… Tiako fa fohy sy fohy ary manampy izy ireo. Misaotra anao tamin'ny fandraisanao anjara SY misaotra anao nanolotra lahatsoratra vaovao ho anay amin'ny alàlan'ny Twitter!
Jul 20, 2008 amin'ny 12: 34 AM
Manaiky aho fa tokony ahitsinao ny lesoka nataonao. Misaotra anao nanondro ny strikethrough HTML. Inona ny kaody hisintona an'io?
Jul 20, 2008 amin'ny 12: 57 AM
Ny HTML dia ireo teny tadiavinao hitokona
Jul 20, 2008 amin'ny 9: 04 AM
Nanavao ity lahatsoratra ity tamin'ny ohatra iray aho. 🙂
Jul 20, 2008 amin'ny 4: 16 AM
Douglas: Manaiky diso aho. Raha mandao azy ireo ianao dia mety hanimba ny mpamaky amin'ny ho avy. OTOH, raha maka toerana boatina savony ianao ka voantso amin'ny karipetra eo amboniny, heveriko fa tsy mampaninona ny manoratra indray ny tantara. JMTCW ihany.
Barbara Ling, Mpanazatra Virtoaly
Jul 20, 2008 amin'ny 5: 48 AM
Ny elanelam-bolako lehibe indrindra noho ny hadisoan'ny bilaogy dia mifototra amin'ireo hadisoana amin'ny fitsipi-pitenenana - mihombo fotsiny ny masoko, ohatra, ny mahita ny fampisehoana plugin WWSGD:
Raha ny vaovao eto, jereo ny fahano!
ARGH! 'Mazava ho azy, tsy misy ifandraisany amin'ny lahatsoratra taloha, fa io no zavatra voalohany tonga tao an-tsaiko.
Hanitsy ny lahatsoratro foana aho raha ilaina izany - anisan'ny maha-bilaogera tompon'andraikitra izany.
Alahady sambatra, Barbara
Jul 20, 2008 amin'ny 9: 01 AM
Misaotra Barbara! Manantena aho fa mahazaka (sy manondro) ireo lesoka nataoko tamin'ny fitsipi-pitenenana.
Toa tsy haiko akory izy ireo aorian'ny henatra olona toa anao misambotra azy ireo ary mampahafantatra ahy. Menatra foana aho satria samy mahalala tsara sy nianatra - kileman-toetra fotsiny io.
Miaraka am-pitandremana, fampiharana ary fanaporofoana dia nahenaako tokoa ny isan'ny lesoka. Iray amin'ireo antony anereko ny tenako hanoratra isan'andro!
Jul 20, 2008 amin'ny 8: 56 AM
Matetika aho no manitsy ny hadisoako araka ny noresahinao saingy miteraka fanontaniana lehibe iray hafa izany:
Mahatsapa ve ianao fa mandiso misteaks ao anaty kommint an'i peeple?
Jul 20, 2008 amin'ny 9: 03 AM
Fanontaniana lehibe ary hiaiky tanteraka aho fa nanitsy ny lesoka tamin'ny tsipelina sy ny fitsipi-pitenenana tamin'ny fanehoan-kevitra koa! Na dia 'novokarin'ny mpampiasa' aza dia mbola ao anaty bilaogiko ihany izany. Araka izany dia mitovy lanja sy mitovy fiheverana izy. Tsy manao zavatra mampiova ny lohahevitra niandohan'ny hafatra aho, na izany aza!
21 Jul 2008 amin'ny 4:49 PM
Raha hadisoana amin'ny fitsipi-pitenenana na tsipelina - toy ny hoe nanana an'izany aho! - Hamboariko izany fa tsy hitodika any.
Fa raha lesoka ao anaty izany dia heveriko fa tokony ahitsy. Ny fidirana bilaogy dia rakitsoratra ara-tantara isan-karazany. Tsy gazety vakiana fa ariana avy eo. Ny lesoka dia tsy tokony ahitsy amin'ny fidirana irery. Ny bilaogy, toy ny Internet sisa, dia maharitra, ary tokony ahitsy hijoro, tsara, tsara.
Ahoana Miankina amin'ilay bilaogera tsirairay avy ny fanitsiana azy ireo. Ho ahy manokana dia hamboarako ny lesoka ary raha ampy izany dia mariho fa nanitsy azy aho. Raha zavatra kely izany, toy ny fahazoana tanàna tsy mety, dia hamboariko tsy ampandrenesina izany.